Famolavolana tsindrona - Mestech Industrial Limited
Ny famolahana tsindrona plastika no be mpampiasa indrindra amin'ny famolavolana plastika. Ny ampahany vita amin'ny tsindrona plastika dia ampiasaina amin'ny elektronika, herinaratra, herinaratra, fitsaboana, fitaterana, fiara, jiro, fiarovana ny tontolo iainana, fiarovana, kojakojan-tokantrano, fitaovana fanatanjahan-tena ary indostria sy vokatra hafa.
Inona ny famolahana tsindrona? Ny famolahana tsindrona plastika dia dingan'ny famokarana hamokarana ampahany amin'ny mari-pana maripana iray, amin'ny alàlan'ny famolavolana fitaovana plastika miempo tanteraka, tsindrona tosika avo lenta ao anaty lavaka famolavolana, aorian'ny fampangatsiahana sy fanasitranana, hahazoana ny fomba famolahana. Ity fomba ity dia mety amin'ny famokarana batch ny faritra sarotra ary iray amin'ireo fomba fanodinana lehibe. Misy dingana 6: fanidiana ny bobongolo, tsindrona plastika miempo, fitazonana tsindry, fampangatsiahana, fanokafana ny bobongolo ary fanalana vokatra. Ny hafainganam-pandeha, ny tsindry, ny toerana (tapaka lalan-dra), ny fotoana sy ny maripana dia singa 5 lehibe amin'ny famolahana tsindrona.
Singa telo amin'ny singa famokarana tsindrona
Fampiharana ny vokatra famolavolana tsindrona
(1) amin'ny vokatra Elektronika: .Ny vokatra elektronika sy fitaovana elektronika ho an'ny mpanjifa (trano plastika, fonosana, boaty, fonony) finday, telefaona, fahitalavitra, telefaona horonan-tsary, milina POS, lakolosim-baravarana.
(2) amin'ny fitaovana ao an-trano: mpanao kafe, juiciet, vata fampangatsiahana, fividianana rivotra, mpanasa lamba ary lafaoro mikraoba
(3) amin'ny fitaovana elektrika: metatra elektrika, boaty elektrika, kabinetra elektrika, mpanova matetika, fonosana insulation ary switch
(4) amin'ny fitaovana fitsaboana sy fitaovana fitsaboana sy fahasalamana: Jiro miasa, sphygmomanometer, syringe, dropper, tavoahangy fanafody, massager, fitaovana fanesorana volo, fitaovam-panatanjahan-tena
(5) amin'ny fiara mandeha amin'ny fiara: Dashboard body frame, bracket batterie, modely eo aloha, boaty fanaraha-maso, frame fanohanana seza, placenta kely, fender, bumper, fonosana chassis, sakana amin'ny tabataba, valin'ny varavarana aoriana.
(6) Amin'ny fitaovana indostrialy: tontonana fitaovana, milina, switch, jiro.
(7) Fitaovana fifamoivoizana sy fitaovan'ny fiara (fanaronana jiro, fonenana) Jiro famantarana, famantarana, tester toaka.
Ny bobongolo, ny milina famolahana tsindrona ary ny akora plastika dia singa iray amin'ny famolavolana tsindrona. Ny milina bobongolo sy ny tsindrona tsindrona dia ny fitaovana famokarana, ary ny akora plastika dia ampiasaina handrafetana ny akora vokatra.
1. lasitra fanindronana
Ny lasitra fanindronana dia karazana fitaovana hamokarana vokatra plastika; fitaovana ihany koa izy io hanomezana vokatra feno plastika sy habe marina. Ny famolahana tsindrona dia karazana fomba fanodinana ampiasaina amin'ny famokarana batch ny faritra sarotra sasany. Manokana, ny plastika miempo dia atsofoka ao anaty lavaka famolavolana amin'ny alàlan'ny milina famolahana tsindrona ao ambany fanerena avo lenta, ary ny vokatra vita amina dia azo aorian'ny fampangatsiahana sy fanasitranana. Ny bobongolo tsindrona dia azo zaraina amin'ny karazany samy hafa arakaraka ny firafitry ny bobongolo samihafa, ny fepetra takiana amin'ny famolavolana vokatra, ny fomba famokarana ary ny fametrahana ary ny fomba fampiasana.
Noho ny halafon'ny famolavolana bobongolo, saingy ny androm-piainany maharitra sy ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta, dia matetika ampiasaina amin'ny famokarana betsaka fotsiny. Ny bobongolo tsindrona dia ampiasaina amin'ny famokarana betsaka ny faritra plastika. Betsaka ny vokatra plastika mahomby be, mizara be ny vidin'ny famolavolana bobongolo, noho izany ny vidin'ny famokarana solika fanindronana vokatra tokana dia ambany lavitra noho ny an'ny fomba fanodinana hafa. Misy dingana telo amin'ny famolavolana bobongolo sy ny fanamafisana ny bobongolo.
(1) Volavola bobongolo:
Ny famolavolana bobongolo dia mifototra amin'ny famolavolana vokatra, ny fampiasana rindrambaiko famolavolana, arakaraka ny haavon'ny famokarana bobongolo amin'ny fanodinana mekanika sy ny fizotran'ny fanodinana injeniera, ny famolavolana ny mekanisma bobongolo iray manontolo.
a) Ny dingana voalohany dia ny famakafakana ny famolavolana vokatra plastika
b) Ny dingana faharoa dia ny fisafidianana fitaovana maty
(c) Ny dingana fahatelo dia ny famolavolana mekanisma bobongolo
(d) Ny dingana fahefatra dia ny famolavolana ny bobongolo
(2) fanodinana bobongolo
Ny fanodinana bobongolo dia amin'ny alàlan'ny fanodinana mekanika mba hamenoana ny famerenana sary → fanomanana ara-pitaovana → fanodinana → fanodinana fotony bobongolo → fanodinana fototra bobongolo → fanodinana electrode → fanodinana faritra bobongolo → fanaraha-maso → famolavolana → bobongolo manidina → bobongolo fitsarana → famokarana
Ny tsingerin'ny fanodinana lasitra fanindronana dia miankina amin'ny fahasarotana sy ny haavon'ny bobongolo. Ny tsingerin'ny famokarana ankapobeny dia 20-60 andro fiasana. Masinina ampiasaina amin'ny fanodinana bobongolo: CNC, lathe, milina fanodinana ankapobeny, grinder ambony, EDM, WEDM, ary koa ny fanangonana fitaovana ho an'ny tanana, fitaovana fandrefesana, sns
(3) Karazana lasitra fanindronana:
Ny bobongolo tsindrona dia azo zaraina amin'ny karazany samy hafa arakaraka ny firafitry ny bobongolo, ny fepetra takiana amin'ny famolavolana ny vokatra, ny fomba famokarana ary ny fametrahana ary ny fomba fampiasana.
(a) Lasitra takelaka roa: amin'ny famolavolana tsindrona dia misaraka ny lasitra mihetsika sy ny bobongolo miorina amin'ny bobongolo, ary avy eo dia esorina ireo faritra plastika, fantatra koa amin'ny hoe lasitra takelaka roa sosona. Izy io dia bobongolo tsindrona plastika tena tsotra sy fototra. Izy io dia azo noforonina ho toy ny bobongolo tsindrona lavaka tokana na bobongolo fanindronana lavaka maro arakaraka ny tinady. Izy io dia bobongolo tsindrona be mpampiasa. Bobongolo ho an'ny koronosy tsindrona tokana na maromaro,
b) bobongolo lovia telo: fantatra koa amin'ny bobongolo fisarahana roa. Raha ampitahaina amin'ny lasitra fanindronana ivelany iray, ny lasitra fanindronana roa dia manampy fantsom-pandefasana ampahany amin'ny singa bobongolo raikitra ho an'ny bobongolo vavahady teboka. Noho ny firafiny sarotra sy ny vidin'ny famokarana lafo dia mazàna tsy ampiasaina amin'ny famolavolana ampahany lehibe izany.
(c) bobongolo mihazakazaka mafana: ny bobongolo mpihazakazaka mafana dia manondro ny bobongolo izay mampiasa ny fitaovana fanamafisana mba hahatonga ny fiempoana ao anaty fantsona tsy hihamafy hatrany. Satria mahomby kokoa noho ny famokarana bobongolo nentim-paharazana, ary ny akora fitehirizana bebe kokoa, noho izany dia be mpampiasa ny bobongolo mihazakazaka any amin'ireo firenena mandroso sy ny faritra mandroso ankehitriny. Ny rafitra mpihazakazaka mafana dia manana rafitra mpihazakazaka mafana iray hafa noho ny bobongolo mahazatra, ka lafo ny vidiny.
(d) bobongolo roa: matetika antsoina hoe karazan-plastika roa amin'ny famolavolana tsindrona masinina fanodinana, famolavolana roa, fa ny lasitra vokatra indray mandeha ihany. Amin'ny ankapobeny, ity fizotry ny famolavolana ity dia antsoina koa hoe famolavolana tsindrona roa sosona, izay mazàna amboara amam-bolo, ary mila milina famolahana tsindrona loko roa manokana.
(4) Ny subsystem an'ny fananganana lasitra fanindronana dia toy izao
Ireo lasitra fanindronana dia matetika misy ireto manaraka ireto:
a) Rafitra fihodinana. Izy io dia manondro ny fantsom-pifamoivoizana plastika ao anaty lasitra manomboka amin'ny tsimok'aretina mankany amin'ny lavaka. Ny rafitra gating iraisana dia misy sprue, distributor, vavahady ary lavaka mangatsiaka.
b) Ny fizarazarana sy ny mekanika hisarihana ny fotony.
d) Fomba fiasa mitari-dalana. Ao amin'ny lasitra plastika, izy io dia manana ny toeran'ny fametrahana azy, mitarika ary mitondra tsindry sasany mba hahazoana antoka fa marina ny famindrana sy ny fametahana bobongolo. Ny mekanika fitarihana famonoana maty dia misy andry mpitari-dalana, tanany mpitari-dalana na loaka fitarihana (nosokafana mivantana teo amin'ny modely) ary ny toeran'ny konona.
(d) Fomba fivoahana / fampitana demoulding. Ao anatin'izany ny paosika fanodinana sy ny fotony. Ampiasaina indrindra hanesorana ireo ampahany amin'ny lasitra. Izy io dia misy tsorakazo ejector na jacking pipa na lovia fanosehana, takelaka ejector, tsorakazo mpiorina ejector, tsorakazo fametahana ary tehina hisintona.
e) Rafitra fanaraha-maso ny mari-pana. Fitaovana fampangatsiahana sy fanafanana.
(f) Rafitra mandany.
(g) Ny ampahany amboarina dia manondro ireo ampahany izay mandrafitra ny lavaka famolavolana. Anisan'izany ny: totohondry, maty vehivavy, fotony, tsorakazo, mamorona peratra ary mampiditra.
(h) Fizarana raikitra sy napetraka. .
(5) Fitaovana ho an'ny bobongolo
Ny lasitra plastika dia misy bobongolo thermoplastic sy bobongolo plastika thermosetting. Ny vy ho an'ny bobongolo plastika dia takiana amin'ny fananana sasany toy ny tanjaka, hamafin'ny, fanoherana, fahamendrehana ary fanoherana ny harafesina. Ho fanampin'izany, ilaina ihany koa ny fananana fikirakirana tsara, toy ny fitsaboana hafanana kely kokoa, ny fanatanterahana fanodinana tsara kokoa, ny fanoherana ny harafesina tsaratsara kokoa, ny fitotoana tsara kokoa sy ny fanaovana poloney, ny fanamboarana tsara kokoa ny fanamboarana, ny fahamendrehana, ny fahamendrehana amin'ny hafanana ary ny habeny ary ny endrika fiasan'ny miasa ny toe-piainana.
Inona no karazana tsindrona ampiasaina amin'ny lasitra fanindronana izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fisafidianana vy vy. Raha ampiana ny mpandraharaha fanamafisana na mpandraharaha fanovana hafa, toy ny fibre vera, dia lehibe ny fahasimban'ny lasitra, noho izany dia tokony hodinihina amin'ny ankapobeny ny fifantenana ny fitaovana. Ny fitaovana plastika asidra mahery dia PVC, POM, PBT; fitaovana plastika asidra malemy dia PC, PP, PMMA, PA. Amin'ny ankapobeny, ny vy vy S136, 1.231, 6420 ary ny lasitra bobongolo hafa dia voafantina ho an'ny plastika mahery vaika mamaivay, raha S136, 1.2316420, SKD61, NAK80, pak90718, sns. Ny filan'ny endrika ivelany amin'ny vokatra dia misy akony lehibe amin'ny fisafidianana akora bobongolo. Ho an'ny ampahany mangarahara sy ny vokatra misy polishing ambonin'ny fitaratra, ny fitaovana misy dia S136, 1.2316718, NAK80 ary pak90420. Ny bobongolo misy takiana mangarahara avo dia tokony misafidy S136, arahin'ny 420. Raha toa ka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny vokatra nefa tsy mandinika ny vidiny sy ny vidiny, dia mety tsy ho mpamorona tsara, ny vidin'ny famokarana lasitra ihany koa no laharam-pahamehana
2.1pitera fanamboarana fitaovana
(1). Masinina manamboatra tsindrona:
izy io no fitaovana famolavolana lehibe indrindra amin'ny fanaovana plastika thermoplastic na thermosetting ho karazana vokatra plastika amin'ny alàlan'ny bobongolo vita amin'ny plastika Masinina famolahana tsindrona mitsivalana, milina fanodinana tsindrona mitsivalana, milina fanodinana tsindrona loko roa, milina famolavolana herinaratra feno nefa, na inona na inona karazana milina famolahana tsindrona, ny asany fototra dia roa:
a) Afanaina ny plastika hiempo.
b) apetraka amin'ny plastika anidina ny tsindry avo mba hamoahana sy hamenoana ny lavaka. Ny masontsivana lehibe amin'ny milina famolavolana tsindrona dia: hery fametahana, habetsahan'ny tsindrona farafahakeliny, hatevin'ny bobongolo farafahakeliny sy farafahakeliny, famindran-toerana mihetsika, elanelan'ny tsorakazo, tsindry fanesorana ary tsindry fanesorana. Ho an'ny faritra misy habe, rafitra ary fitaovana samihafa, ary koa bobongolo misy habe sy karazany samy hafa dia tokony hofidiana modely sy masontsivana samihafa amin'ny milina famolahana tsindrona. Ny milina famolavolana herinaratra feno dia manana tombony amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta, fanaraha-maso mazava ary fahombiazan'ny famokarana avo. Izy io dia ampiasaina amin'ny famolavolana ny tsindrona amin'ny ampahany sasany.
(2) Fitaovana fanampiana:
(a) Ny manipulator ny milina famolahana tsindrona dia fitaovana famokarana mandeha ho azy izay afaka maka tahaka ny asan'ny rantsam-batana ambony amin'ny olombelona, ​​ary afaka mifehy azy io hitaterana vokatra na hiasa fitaovana araky ny fepetra takiana mialoha. Ny manipulator dia afaka miantoka ny tsy fitovizan'ny tsingerin'ny fandidiana, manatsara ny kalitao ary mahatonga azy io ho azo antoka kokoa. Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny fanodinana plastika any Shina, ny ambaratonga mandeha ho azy ny fitaovana fanamboarana tsindrona dia lasa avo kokoa hatrany. Ny milina famolahana tsindrona maoderina dia matetika miaraka amin'ny manipulator hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana.
b) Fanafanana solika / chiller-drano: fanamafisana na fampangatsiahana amin'ny ranoka mikoriana amin'ny bobongolo, fampitomboana ny hafanan'ny bobongolo, fanatsarana ny kalitaon'ny tany, na fihenan'ny hafanan'ny lasitra haingana hanatsarana ny vokatra.
(c) Fanamainana dehumidification: esory ny hamandoana amin'ny akora plastika amin'ny alàlan'ny fanafanana sy fofona.
Atrikasa bobongolo amin'ny tsindrona
Tsipika famokarana tsindrona tsindrona
Sombin-tsarimihetsika vita amin'ny plastika
Ny resina plastika ampiasaina amin'ny famolavolana tsindrona: Ireto ambany ireto dia thermoplastika mahazatra indrindra ampiasaina amin'ny famolavolana tsindrona: Acrylonitrile Butadiene Styrene, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), dia polymer thermoplastic sy amorphous. ... Polyethylene. ... Polycarbonate. ... Polyamide (Nylon) ... Polystyrene misy fiantraikany lehibe. ... Polypropylene
Material hakitroky hamolavola
Shrinkage endri-javatra Application
ABS(Acrylonitrite Butadiene Styrene) ~ 1,08 1,04 0,60 Haben'ny milamina, fananana mekanika feno,mora mandeha amin'ny herinaratra, mamolavola tsindrona mora trano plastika ho an'ny vokatra elektronika
PC (Polycarbonate) 1.18 ~ 1.20 0.50 Ny tanjaky ny fiantraikany tsara, ny habeny milamina ary ny insulation tsara.Ny fanoherana ny harafesina ary ny fanoherana fonenana plastika, fonony miaro, faritra kely fampitana ho an'ny vokatra elektronika, vokatra elektrika
PMMA(Polymethyl methacrylate) 1.17 ~ 1.20 0,60 Manana transmittance tsara 92% sy tanjaka mekanika feno.Ny tanjaky ny fiatraikany dia ambany, mora tohina Solosaina mangarahara sy fampisehoana diary fampisehoana fitaovana
PP(Polypropylene) ~ 0,89 0,93 2.00 Manana fihenam-bidy avo, fanoherana ny hamandoana,fanoherana ny hafanana ambony ary tsy mora rovitra.Fanoherana ambany akanjo, mora mihantitra, mahavita ambany mari-pana ambany Kaontenera sakafo, lakozia, boaty misy lafaoro mikraoba, fitoeram-pitsaboana
(Klôro) 1.38-1.41 1.50 Fanamafisana henjana, mahazaka akanjo, tsara, mamorona sarotra kokoa, tsy fahombiazan'ny mari-pana avo lenta Manao fantsona sy piraofilina
nylon 1.12 ~ 1,15 0.7-1.0 Mafy, mahazaka, mahatohitra rano, mahatohitra mahazaka havizanana, insulate tsara. Mihena be, mitarika Sombin'ny milina, faritra simika, faritra fampitana
POM (Polyacetel) 1,42 2.10 Toetra mekanika tena tsara, tanjaka sy hamafin'ny hery, fanoherana fanoherana ary fanoherana ny fiatraikany. Milamina tsy miova Sombin'ny milina, faritra simika, faritra ampita, faritra misy ny fikorontanana ary ny fizarana miasa amin'ny hafanan'ny efitrano
TPU(Polyurethane thermoplastic) 1.05 ~ 1.25 1.20 Elastomer, mahazaka-mahatohitra, mahatohitra menaka, elastika avo sy ambany amin'ny hafanana, tsy misy poizina Ampiasaina amin'ny fitsaboana, sakafo, vokatra elektronika sy tontolo iainana mari-pana ambany
Ny dingan'ny famolavolana tsindrona dia dingana iray izay ahodina ny akora matevina, voatsindrona, mangatsiaka ary misaraka mba hamokarana ampahany amin'ny ampahany vita. Ny dingan'ny famolavolana tsindrona ankapobeny amin'ny faritra plastika dia ahitana dingana 7. : Famaritana parameter -> fanidiana ny bobongolo-> famenoana -> (entona entona, fanampiana ny rano) fitazonana tsindry -> fampangatsiahana -> fanokafana bobongolo -> fampisehoana.
Ny hafainganam-pandeha, ny tsindry, ny toerana (tapaka lalan-dra), ny fotoana sy ny maripana no masontsivana dimy lehibe amin'ny fizotry ny famolavolana tsindrona. Amin'ny famokarana famolavolana tsindrona dia ny fanalefahana ireo masontsivana ireo mba hanatsarana sy hahazoana habe sy endrika bika mendrika.
Teknolojia famolavolana tsindrona fito mahazatra
1. Fanamboarana tsindrona indroa
2. tsindrona mihoapampana
3. Famolavolana tsindrona mpihazakazaka mafana
3. IMD: tsindrona haingo amin'ny bobongolo
4. tsindrona ampahany lehibe
5. Famolavolana tsindrona amin'ireo ampahany misongadina
6. Famolavolana ny tsindrona amin'ny faritra misy ny fiara
7. Sombina amin'ny rindrina mahia
Afaka manome ny ampahany vita amin'ny tsindrona plastika amin'ny polymer mouldable tsindrona isan-karazany ianao ary amin'ny haben'ny 0.1gram-10kgs ilainao. Ho fanampin'izany, afaka mamolavola inserts misy kofehy be loatra izahay, mpampifandray vy na vy hafa vita amin'ny tsindrona plastika mba hanomezana vokatra farany matihanina ny vokatrao. Ny sub-assemblée koa dia azo noforonina ho ampahany amin'ny serivisinay amin'ny famolavolana plastika ary fonosina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Toy izany koa amin'ny dingana famaranana isan-karazany, ao anatin'izany:
* Fametahana plastika Chrome
* Saripika nomerika
* Fanontana pirinty
* RF miaro
* Fonosana sy fakan-tsary
* Fanaraha-maso kalitao amin'ny famolavolana tsindrona Manolotra fitaovana haingana, prototyping ary serivisy famolavolana post koa izahay.
Fanovana sy famahana olana
Aorian'ny famolavolana dia misy fahasamihafana misy eo amin'ny faritra plastika sy ny fenitra momba ny kalitao efa voafaritra (fenitra fanaraha-maso), izay tsy mahafeno ny fepetra takian'ny dingana manaraka. Io no lesoka amin'ny faritra plastika, izay matetika antsoina hoe olan'ny kalitao. Tokony handinika ny antony mahatonga ireo kilema ireo isika ary hampihena azy ireo farafaharatsiny. Amin'ny ankapobeny, ireo lesoka ireo dia avy amin'ireto lafiny manaraka ireto: bobongolo, akora fototra, masontsivana fanodinana, fitaovana Tontolo iainana sy mpiasa.
1.Ny lesoka mahazatra:
(1). Ny fahasamihafana amin'ny loko: raha ny lokon'ny ampahany amin'ny famolahana tsindrona dia tsy mitovy amin'ny santionany loko tokana ataon'ny maso mitanjaka, dia tsaraina ho fahasamihafana eo ambanin'ny loharanom-pahazavana mahazatra.
(2). Tsy feno ny famenoana (tsy fahampian'ny lakaoly): tsy feno ny ampahany amin'ny famolavolana tsindrona, ary misy fipoahana, banga, lavaka mitete, sns, izay tsy mifanaraka amin'ny môdely mahazatra, izay antsoina hoe tsy fahampiana lakaoly.
(3). Warform deformation: ny endrik'ireo faritra plastika dia hihodina sy hihodinkodina aorian'ny fampandehanan-dresaka na amin'ny fotoana manaraka. Raha miatrika anatiny na ivelany ny lafiny mahitsy, na miakatra sy midina ny tapany fisaka, raha tsy mitovy ny tongotra entin'ny vokatra dia antsoina hoe déformation izy io, izay azo zaraina ho fanovana eo an-toerana sy ny fiovana amin'ny ankapobeny.
(4). Marika tsipika (tsipika): soritra mitanjozotra amin'ny lafin'ny faritra plastika, natsangan'ny fampifangaroana plastika ao anaty lasitra, fa ny mitsonika dia tsy mifangaro tanteraka eo amin'ny fihaonan'izy ireo, ka tsy azo ampifangaroina ho iray. Tsipika mahitsy matetika izy ireo, mivoatra hatrany amin'ny lalina ka hatrany amin'ny lavaka. Ity trangan-javatra ity dia misy fiatraikany eo amin'ny endrika ivelany sy ny toetra mekanika.
(5). Ripple: ny velaran'ny faritra miorina amin'ny tsindrona dia misy tadiny na rahona toy ny hafaliana, na ny atin'ny vokatra mangarahara dia misy lamina mifangaroharo, izay antsoina hoe ripple.
(6). Over edge (tselatra, Cape).
(7). Ny tsy fitovizan'ny refy: ny fihenan-tsakafo sy ny ady amin'ny ampahany mihombo amin'ny tsindrona amin'ny fizotran'ny famolavolana
2. Fanaraha-maso sy fanatsarana kalitao: ao anatin'izany ny teknolojia sy ny fitantanana
(1). Haavo ara-teknika: fifantina marina ny fitaovana, famolavolana firafitry ny vokatra, fisafidianana akora bobongolo mety, fanatsarana ny famolavolana firafitry ny bobongolo mba hanamorana ny famenoana, ny fivoahana ary ny fanesorana ireo faritra, ny fametrahana ny fisarahan-toerana, ny fantsona mikoriana ary ny fidiran'ny fingotra fampiasana fitaovana mandroso fanovana tsindrona.
(2). Haavo fitantanana: fifehezana kalitao ny fitaovana ho tonga, famolavolana politika sy fenitra tsara kalitao mahomby, fanofanana ara-teknika, famolavolana ny fizotran'ny fizotrany azo atao, ny firaketana sy ny fanadihadiana ny angon-drakitra ary ny fametrahana rafitra kalitao tsara.
Orinasa Mestech dia mamokatra lasitra an-jatony sy vokatra plastika an-tapitrisany ho an'ny mpanjifa eo an-toerana sy manerantany isan-taona. Raha te hahafantatra bebe kokoa ianao na manontany momba ny teny nalaina momba ny famolavolana tsindrona plastika dia mifandraisa aminay anio.